Ngaba indawo yakho iphantsi? Isiseko sedatha? | Martech Zone
NgoLwesine, Aprili 24, 2008 NgoLwesithathu, Oktobha 29, 2014 Douglas Karr
Ingaba uyazi? Njani ngesiseko sakho sedatha? Ngaba indawo yakho iyasombulula? Ngaba indawo yakho kunye namaphepha akho phezulu kodwa ukhonza iimpazamo zedatha?
Ngokwenyani besinomzekelo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo apho indawo yethu ibisebenza ngokupheleleyo, kodwa besingena kwimicimbi nenani lonxibelelwano lwedatha. Ngelishwa, safumanisa ngumthengi ongonwabanga esazisa. Khange asiqonde isizathu sokuba kufuneka asizise-wayenyanisile!
Abandulelayo ngaphambili benze into elungileyo kwaye batyikitya ngenkonzo yokubeka iliso. Yayiyinkonzo enexabiso elifanelekileyo kwi $ 49.95 ngenyanga. Xa ndangena, ndakhawuleza ndalahleka ndizama ukufumana indlela ejikelezayo kodwa ndade ndafumanisa ukuba besisombulula iphepha lethu lasekhaya kuphela. Khange sivavanye isatifikethi se-SSL, besingavavanyi ii-subdomains zethu, khange sijonge ukuba ingaba isiseko sedatha siyaphendula na.
Ndikhawuleze ndaqala ukongeza enye itsheki kwaye ndahambisa ixesha ukusuka kumzuzu emi-5 ukuya kumzuzu omnye. Xa ndicofa ukungenisa 'iwotshi' entsha, ndothuka xa ndibona ukuba ndiza kuhlawuliswa imali yokuseta eyi- $ 1 kunye nenye i- $ 99 ngenyanga. Kulungile- umrhumo wokuseta i-49.95 yeedola kwinto endiyimisileyo !!! Ndiphume ndaza ndaqala ukukhangela inkonzo entsha.
Ndixhume kuTwitter (my injini yokukhangela entsha) nomhlobo olungileyo, UAde Olonoh of Umsebenzi wokuphindaphinda, weza kundinceda. (Ukubhloga okungakumbi-iAde encinci ye-twitter!)
UAde wandikhomba Pingdom. I-Pingdom ine-interface ecocekileyo ngokumangalisayo eneempawu ezomeleleyo. Ndacwangcisa i API Iifowuni zesicelo sethu sokuqinisekisa ukuba isiseko sedatha siyasebenza kwaye emva koko ndacwangcisa iPingdom ukuhambisa iifowuni kwaye ndikhangele impendulo.
Inkonzo isengqiqweni ngokunjalo. Isiseko yi- $ 9.95 / mo kwaye ivumela iitsheki ezi-5, imiyalezo ye-SMS engama-20, i-imeyile engenamkhawulo, ixesha lokulayisha kunye nexesha lokulayisha, ukujonga ukuya kumzuzu ngamnye, i-HTTP, i-HTTPS, i-TCP, i-Ping kunye ne-UDP yokutshekisha, njl. Imiyalezo engama-30 ye-SMS. Banamandla kakhulu API ukuba ungathanda ukudibanisa esweni.
Iiseva zokuphanda ziseDallas, eBerkeley, eAmsterdam, eVasteras nasekuFundeni. Ndizama ukufumanisa ukuba Ndiqinisekisile ngePingdom ukuba singayidlula iSMS ngokwakha uluhlu lwe-imeyile yeedilesi ze-imeyile zeefowuni zabasebenzi bethu.
Ndabhala inkampani ndicela into. Kuya kuba mnandi ukuba, ngaphandle kwe-imeyile kunye nezilumkiso ze-SMS, basivumele isicelo se-HTTP. Oku kungandivumela ukuba ndibeke esweni omnye wabathengisi beqela lethu lesithathu ebenemicimbi mva nje. Ukuba ndinokuba nePingdom ndenze isicelo kwiserver yam, ndingazitshintshela ngokuzenzekelayo iinkonzo zethu kwisipele. Nje ukuba inkqubo ibuye kwakhona, ndingayitshintsha ibuye. Ndingakwenza oku nge-imeyile; nangona kunjalo, ukulibaziseka kunokusiluma.
Sineentsuku ezingama-29 eziseleyo kwityala. Logama nje singayiboni imicimbi, siza kutsibela kwiphakheji esisiseko. Oko kukodwa kuya kusisindisa ngamabhakana ambalwa kwaye kusinike ukujonga esweni ngokubanzi!
tags: ixesha lokuphumlaPingdomisantya
I-OSX Bug: Shwabanisa umfanekiso ube zi-16 Terabytes?
Epreli 24, 2008 ngo-11: 12 PM
Epreli 25, 2008 ngo-6: 06 AM
Epreli 25, 2008 ngo-9: 24 AM
We’ve been using Pingdom with IFomSpring for over a year and are happy with the service.
Epreli 29, 2008 ngo-10: 23 PM
I just want to introduce 2 more services – free mon.itor.us kwaye premium monitis monitoring services. One of their advantage you can combine external page load monitoring with systems resource monitoring and be notified about low systems resource. Then you can really be proactive not only fixing but preventing a failure. Give it a try!
Epreli 30, 2008 ngo-7: 57 AM